Umbhalo olandelayo kuphela ohlanganiswe ohlangothini olunonya:
Uma ukopisha noma imuphi umbhalo ovela ekhasini elinjalo, intambo engafuneki igcina iphela ebhodini lokunamathisela (kulokhu kusetshenziswa kungakhathalekile umbhalo okopishiwe). Esikhundleni "somyalo omubi" manje usungaqhamuka nezinto eziningi ezimbi. Yonke le nto iba yingozi uma ukuhlukaniswa kolayini ekugcineni kolayini kusetshenziselwa ukwenza ikhodi ngokushesha:
Kulula futhi ukusetha kabusha okukhiphayo kwekhonsoli ukuze umsebenzisi angaboni ngokushesha lokho akufakile. Isibonelo, kucatshangwa ukuthi lapho ukopisha amazwibela ekhodi angenabungozi, ungadubula ukwahlukanisa kwakho ngokudlula.
Uma ukhetha umbhalo owuthandayo, kwiFirefox yakamuva (v. 45.0), isibonelo, akuwona lo mbhalo kepha umbhalo osemuva kwawo ogcina kubhodi yokunameka.
Zombili izindlela zingazanywa bukhoma lapha. Lapha ukwahluka kwe-JS:
Kanye nokuhluka kwe-CSS:
vala abezindaba abasha be-2 GmbH
Ucingo +49 89 21 540 01 42
Ifekisi +49 89 21 544 59 1
Ukuqinisekiswa kwemakhaphu ye-W3C